घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू लाइटन ब्यान्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिल तथ्य
एल बी पूर्ण रूपमा एक भरोसेमंद बायाँ फिर्ताको नाम प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम हो। "'ड्यूक"। हाम्रो लाइटन बेनजाइजेशन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्य धेरै र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, उहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा राम्रो उनको सेट-टुक्रा विशेषज्ञता र दण्डको लागि जानिन्छ। तथापि, लाइटन बाइन बीओ को बारे मा धेरै केहि प्रशंसकहरु को बारे मा धेरै जान्दछन् जो एकदम दिलचस्प छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Leighton Baines Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
लेाइटन जॉन बैन्स क्रिर्बी मा 11th डिसेम्बर 1984 मा, यूनाइटेड किंगडम र श्री र श्री जॉन बिएन को जन्म भयो। उहाँ एक साम्राज्यको जन्म भएको थियो।
Kirkby मा उठाइयो, Merseyside, बैन सेन्ट जोसेफ द वर्कर क्याथोलिक प्राइमरी स्कूल मा पढाईएको थियो। स्थानीय लिवरपूल प्राथमिक स्कूलले उनलाई दिए खेलकूदको अवधिमा खेलकुद खेलकुद खेलकुदको खेलमा प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्ने अवसर। आफ्नो क्यारियरमा प्रारम्भिक प्रतिज्ञाहरू हेर्न, उनका आमाबाबुले आफ्नो छोरालाई आइतवार लीग फुटबलमा सहभागी गर्ने निर्णय गरे जसको साप्ताहिक गतिविधि लेाइटन ब्यान्स अध्ययनको साथ हस्तक्षेप गरेन।
कृपया नोट: आइतबारको खेल खेल्ने एसोसिएशन फुटबल लीगको वर्णन गर्न आइतवार लीग फुटबल युनाइटेड किंग्डममा एक शब्द हो, जस्तै सामान्य सामान्य शनिबार।
एक्सएनमक्सको उमेरमा एकजना बच्चाको रूपमा लीग फुटबलमा सहभागी भए तापनि एक मुद्दा बनी। लाइटन बीन्स एक शर्मीली बच्चा थिए र अन्तर्वार्ता भयो। शर्मीली हुनुको कारण उहाँसँग अत्यन्तै नराम्रो परिणामहरू छन् जसले त्यसलाई अन्य साथीहरूलाई साथीहरूको रूपमा राख्नु हुँदैन। धन्यबाद, तिनका आमाबाबु र विद्यालय अध्यापकहरूले तिनलाई आफ्नो शोकलाई पराजित गर्न मदत गरे। यसले फुटबलर बन्ने क्यारियर जुनूनलाई बेवास्ता गर्यो।
Leighton Baines Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
लाइटपूल भन्दा एभटनका लागि लाइटन ब्यान्स 'ब्रेकपेशन प्राथमिकता' को रूपमा बढी थियो किनभने उनी एभरटनमा रूचि राखेका थिए। उहाँले एक पल्ट गार्जियनलाई भने;
म केवल जवान थिएँ। मैले लिभरपूलमा रुचि गुमाएँ, तर म अझै फुटबल हेर्न मन पराउँछु। जब एक्सनटनले मैनचेस्टर युनाइटेड एक्सएनएमएक्सएक्स-एक्सएनएक्सलाई हरायो म 1995 एफए कप फाइनल उमेर9मा थिएँ। यो मैले Everton राम्रो तरिकाले हेर्ने क्रममा सुरू गरें।
उनको आमाले मलाई गुडिसन पार्कमा आफ्नै मा जाने अनुमति दिनुभएन। उनीहरूलाई मेरो चालकलाई जोर दिएँ जो मेरो लागि तीन वर्ष भन्दा पुरानो छ। हामी बसाइ, 50p Kirkby बाट प्राप्त गर्थ्यौं, र त्यसपछि बाहिर बाहिर लटकाउन सक्दिन सम्म हामी चुपचाप गर्न सक्दिनौं। हामी जबसम्म ती एक्सट्युम-लेभ जानेको लागि एक्सएनएमएक्स मिनेटको म्याचमा प्रवेश द्वार खोल्नुसम्म हामी पर्खनेछौँ।
त्यहाँ गेट्समा भण्डारीहरू थिए र यदि तिनीहरू राम्रो मूडमा थिए भने तिनीहरू डुब्न र हामीलाई दिन्छन्। एक जना मानिस, विशेष गरी, हाम्रो लागि हेर्न प्रयोग गरिन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ, यदि हामी असीमित हुनुहुन्थ्यो, ढोकामा हुनेछौं र ढोकामा आउनेछौं र हामी केहि पनि हेर्न सक्दैनौं। "
धेरै विकसित युवाको रूपमा, बिनले स्थायी रूपमा आफ्नो बाह्य संसारको साथ अनुभव गरिसकेका छन् र पहिले नै बताए अनुसार आफ्ना आमाबाबु र अध्यापकहरूको हस्तक्षेप संग उनको शंकालाई छोडे। उनले भविष्यका प्रोफेसरहरूसँग कुञ्जी बाटो भनिने टोलीको लागि आइतवार लीग खेलिरहेको छ रयान टेलर (जो नयाँ क्यासल मा समाप्त भयो) र David Nugent (पोर्टोमोथ र लिसेस्टर, अरू मध्ये अन्य)।
यो नोटमा उल्लेखनीय छ कि लाइटन ब्यान्सले आइतबार लीगबाट स्नातक गरे र एभरटन भनिन्। परीक्षा सहभागी भएपछि, आंशिक रूपमा अकादमीमा स्वीकारे। क्लबको अर्को पुष्टिकरण ट्रेलमा ब्यान्सले अकादमीबाट इन्कार गरे। Wigan बाट अर्को परीक्षण सफलतापूर्वक सफल भयो। उनले 2002 सम्म Wigan मा बनी जब उनले आफ्नो वरिष्ठ टोलीलाई पदोन्नति गरे। ब्यान्ड्स मिडफील्ड र आक्रमणमा खेलेका थिए। यो मात्र थियो जब उनले Wigan मा आफ्नो वरिष्ठ क्यारियर शुरू गरे कि उनले बायाँ फिर्ताको स्थितिमा खेल्न थाले।
मृगौलायती, लिभरपूलले बायाँ-पछाडि जान लागेकी थिईन किनकि उनीहरूमा उनको चासो थियो। सुनेपछि, बेन्न्सले यो संसारको अन्त्य जस्तै महसुस गरे र शङ्का गरेको एभरटन पनि कल आयो। उहाँले एपटनलाई धेरै अनुकरण र क्षमादान पछि स्वीकार्नुभयो र उहाँका आमाबाबुको नजिक रहने बोलीमा पनि। बाकि, जुन प्रायः भन्नुहुन्छ, अहिले इतिहास हो।
Leighton Baines Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, एक ठूलो महिला छ, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक इंग्ल्यान्ड फुटबलर पछि, ग्लैमरस पत्नी वा प्रेमिका हो।
जस्तै टोबी एल्डरवेयरल्ड, बेनले खेल मैदानमा आफ्नो सम्बन्ध सुरू गरे रातील नामक उनको बचपन प्रिय। उनीहरूको सम्बन्ध उनीहरूलाई उत्कृष्ट प्रेमको सट्टा साँचो प्रेममा लिए। बिनले एक पटक याद गरे कि उनको सबैभन्दा प्रारम्भिक बचपन सम्झनाहरु मध्ये एक जसले राहेलका लागि आफ्नो प्रेम घोषणा गरिरहेको थियो र उनीहरुले विश्वास गर्थे कि कुनै दिन विवाह गर्न सक्थे।
2009 मा, लाइटन ब्यान्सले एक गुप्त समारोहमा राहेललाई विवाह गरे। यस जोडीले3बच्चाहरू सँगै पहिलोपटक जन्मिएका छन् जब लाइटन केवल 18 वर्ष पुरानो थियो। तल बायाँको चराको तस्बिर हो जुन बायाँबाट सेकेन्ड हो।
रचेल एक अन्य Evertonian पत्नीहरु र प्रेमिका को एक छ, जसले आफ्नो पति को वित्तीय संसाधन को बधाई गरेको छ कि स्तन कैंसर अभियान को लागि धन जुटाने को लागि।
Leighton Baines Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
लाइटन उत्सुक र ऊर्जावान छ। उनको खुला दिमाग र दार्शनिक दृष्टिकोणले तिनलाई सधैं खोजीको खोजी र जीवनको साँचो अर्थबारे उत्प्रेरित गर्छ। उहाँ बहिष्कार, आशावादी र उत्साहजनक हुनुहुन्छ र परिवर्तनहरू मनपर्छ। बीन्सले आफ्नो विचारहरू कंक्रीट कार्यहरूमा परिणत गर्न सक्षम छन् र उनीहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न केहि पनि गर्नेछ।
लाइटन बेन शक्ति: लाइटन बीन्स उदार, आदर्शवादी र हास्यको एकदम राम्रो अर्थ छ।
लाइटन बेन कमजोरी: कुनै पनि कुरा भन्नु हुनेछ कि कसरी अविश्वसनीय छ।
कुन लाइटन ब्यान्स मनपर्छ: स्वतन्त्रता, यात्रा, दर्शन र आफ्नो नजिकको साथी संग बाहिर जाँदैछ, मील्स केन.
कुन लाइटन ब्यान्सलाई मननपर्दैन: घाइते मान्छे, विपरित, बन्द-भित्री सिद्धान्तहरू, विवरणहरू।
Leighton Baines Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
लेाइटन निचो मध्य-कक्षाको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। एक पल्ट एक पल्ट, उनको आमाबाबु एक बच्चा को रूप मा उनको पूर्ण पूर्ण Everton सीजन टिकट खर्च करने के लिए पर्याप्त समृद्ध नहीं थे। उनीहरूले आफ्नो छोरा लाइटनको लागि एक एकल Everton टिकट खरीद गर्न सकेनन। एक जना बुबा र आमाले आफ्ना छोराको साथ आफ्नो भाइलाई अनुमति दिए जुन गिसिसन पार्क बाहिर बाहिर निस्कने को लागी बाहिर निस्कने गेट्सको लागि पर्खनेछ। दस मूल्यवान मिनेट निःशुल्कका लागि!
यो नोट गर्न उल्लेखनीय छ कि उनको परिवारमा सबैको परिवारका सबैजना पनि लिभरपूल वा एथेटनियन प्रशंसक हुन्। ब्यान्सले लामो समयसम्म एथटनमा रहेका छन् किनभने उनीहरूका प्रिय आमाबाबु जो आफ्नो छोराको नजिक रहन चाहन्छन्।
ब्यान्सले एक पटक वर्णन गरेको छ कि उनको आमाबाबुले तिनलाई आफ्नो अकादमीमा राख्ने एटनटनको इन्कार गरेर विनाश गरेपछि उनीहरूले कसरी खडा गरे। तिनका शब्दहरूमा
"म त्यो दिन घर आइपुग्छु र सोचेँ कि त्यो थियो। भनिएको छ म एकदम राम्रो थिएन एक ठूलो झटका थियो। त्यहाँबाट म भेडाहरू गए र परीक्षण खेल खेल्दै।
केही वर्ष पछि, Everton उनको साथ खुसी हुनुभयो र उसलाई फिर्ता आउन चाहन्थे। भौगोलिक रूपमा यो मेरो आमाबाबुको लागि सजिलो थियो, त्यसो कि म कहाँ जान्छ र जहाँ म रुँदै थिएँ "।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Leighton बेन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.